အမျိုးအစား: Society က
လူထုံဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်ကားအဘယ်နည်း။ မင်းလူထုံလား Idiocy (oligophrenia, imbecility, debility) သည်မပျောက်ကင်းနိုင်သောစိတ်ရောဂါ၊ အဆိုးရွားဆုံးစိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနှင့်ပြောဆိုမှုလုံးဝနီးပါးသို့မဟုတ်လုံးဝမရှိခြင်းနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်နှေးခြင်းဖြစ်သည်။ စကားလုံးကဖြစ်နေတယ် ...
ဘူဂေးရီးယားစီးကရက်အခုရောင်းပါသလား Rhodope ကိုအရင်ရေးပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ဖြစ်နိုင်တယ် sigopt.org - သူတို့ Rodopi, BT, နှင့်ဘဏ္theာစိုးကဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုသာရောင်းသည်။ 1995 တွင်ရော့ဒ်ပီသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အယ်လီနာ Malysheva ယခုအများသုံးအိမ်သာကိုသုံးပါဖို့ဘယ်လိုသင်ပေးတယ်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း ငါ Malyshev (Malakhov နှင့်သူ၏ Urinotherapy) uhohotal ခြေအိတ်တွေနဲ့ဒီကောင်လေးမြင်သည်အတိုင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ပါ, ငါ channel ကိုအကူးအပြောင်းကိုစတင် ...
ထို့အပြင်မည်သူနိုင်ငံသားသည် Farhat အမည်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သနည်း။ Tatar ။ မွတ်စလင် UZBEK, TAJIK, AZERBAIJAN Farhad (Farhat)၊ ပုလ်အမည်၊ ဇာစ်မြစ် - ပါရှန်း၊ Farhad ဟူသောအမည်၏အဓိပ္ပာယ် -“ smart”၊ အကယ်၍ ...
"သန့်ရှင်းသောရိုးရှင်းခြင်း" ဟူသောအသုံးအနှုန်းကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ထိုသို့ကဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒဏ္legာရီအရ Ian ကိုမီးရှို့ရန်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့်နေရာတွင် Jan Hus ကိုသေဒဏ်စီရင်ရာနေရာ၌ထင်းဖြင့်ထင်းခုတ်ခဲ့ရသည်။
ဘယ်လိုအမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်အမျက်ထွက်စာလုံးပေါင်း? ကြိုက်လားကြိုက်လား? ပျော်စရာကောင်းလားပျော်စရာလား။ အလုပ်လား၊ လေ့လာပါ၊ လေ့လာပါ၊ လေ့လာပါ။ - V.I. Lenin အားသင်ကြားသည်အဆိုပြုလွှာ၏အခြေအနေနှင့်မေးခွန်းနှင့်အစဉ်မပြတ်စစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ:
မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူငြင်းခုံ: တပ်မတော် Shoigu အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါသလား ပညာရေးအားဖြင့်သူတစ်ဦးအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးများတွင် 1993 နှစ်အရံဒုဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှာတော့၏သင်တန်းသူတစ်ဦးတနေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မထားပါဘူး။ http://www.pravda.info/kompromat/90102.html မဟုတ် ...
အဘယ်ကြောင့်အခမဲ့တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ဓာတ်ဆီနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၌၎င်း, ရုရှားနိုင်ငံအမေရိကား၌ရှိသကဲ့သို့ပေးဆောင်? တာ့ခ်မင်နစ္စတန်ဆင်းရဲမွဲတေမှု patamushta ပြီးတော့ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ရဲ့စဉ်းစားကြဘူး ...
ဂျူးများ၏ထူးခြားသောအပြင်ဘက်အသွင်အပြင်။ သူတို့ကကွဲပြားခြားနား - ဥရောပနှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်ဂျူးများ။ ငါနှစ်ပေါင်း 25 ကျော်အဘို့ထိုသူတို့လေ့လာနေ))) ငါမဆိုနိဂုံးချုပ်ဖို့လာကြပြီမဟုတ်))) သူတို့ကမှောင်မိုက်အရေပြားရှိနိုင်ပါသည် ...
Cossacks, Ukrains, "Ukrainians" ၏ဆံပင်ပုံစံ - မောက်ပါသောဆံပင်နှင့်ဆံပင်သော့တစ်ချောင်း။ အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျဒီပေါ်လာခဲ့တာလဲ
Cossacks, Ukrainians, "Ukrainians" ၏ဆံပင်ပုံစံ - မောက်ပါသောဆံပင်နှင့်ဆံပင်သော့တစ်ချောင်း။ အဘယ်အရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်အတိအကျဒီပေါ်လာခဲ့တာလဲ ချောချောမွေ့မွေ့ရိတ်ထားသော ဦး ခေါင်းနှင့်ရှည်လျားသောမုတ်ဆိတ်မွှေး (သူကိုလည်း osledets ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်ထူးခြားသည်။
အမျိုးသား Self-ဝိညာဏ်ကဘာလဲ? HT * tp: ထူးခြားသော၏ //w*ww.rus-sky.com/history/library/zertzalo.h*tm စာရင်းငါဆိုပါစို့? ကဘီယာမတ်ေတာ, ဘောလုံးကွင်းများနှင့်အရာ၏မျိုးမပါလျှင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝိညာဏ်, ဖက်ဆစ်ဝါဒသို့လှည့်နိုင်စွမ်းရှိပြီးသို့မဟုတ် ...
စိတ်အခန်းထဲကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ သူ့စိတ်ထဲလူသိများတဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်း - ဒါပေမယ့်သူ့မှာစိတ်ထဲကအခန်းတစ်ခန်းနှင့်သော့ပျောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာစိတ်တွေအများကြီးရှိပေမယ့်သင်ကရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ)))))))))) ရပ်ကွက်: မိုက်မဲသောအရာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်သူတစ် ဦး ၏မထင်မှတ်ဖော်ပြချက် ...
သူခိုးများကားအဘယ်သူနည်း။ ကောင်းပြီ, ယေဘုယျအားဖြင့်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အကြည့်ရှုပါ =))) ဒါအခြေခံအားဖြင့်အားလုံးစတင်သည် =)))) link ကိုဒီကိစ္စကိုအပေါ်စီမံကိန်းကိုအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့နေသည် - သူခိုးကိုစောင့်ကြည့်, ရာဇဝတ်မှုလောကပိုင် BLAT သူတစ် ဦး ...
စကားလုံး "နောင်တ" ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
ဆိုလိုသည်မှာ“ နောင်တရ” ဟူသောစကားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ကံဆိုး = pichalko adj မှတစ် ဦး ကသိပ္ပံနည်းကျတန်ဖိုးကို adverb ။ ဝမ်းနည်းစရာ; ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ၀ မ်းနည်းခြင်း၊ နောင်တရခြင်း #9670၊ သတင်းစာတွေကအနုပညာအကြောင်းလည်းရေးထားတာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ...
AS Blizzard ဇာတ်လမ်း၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း အင်တာနက်ကိုတွင်အေးမြ Pushkinsrochno အိုကေသဘောတူတွေ့ပါ !!! ကျေးဇူးတင်ပါသည် !! စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိအတားအဆီးရှိပါတယ်လှပမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇာတ်လမ်း။ Pushkin ...
ငါ့ကိုတိုတောင်းပါ ဒphilosophနိကဗေဒဘာသာရပ်၊ ယဉ်ကျေးမှုတွင်နေရာနှင့်အခန်းကဏ္ Phil ဒosophနိကဗေဒသည်ကမ္ဘာ၏အထွေထွေသီအိုရီဖြစ်သည်။ ဒနိကဗေဒနှင့်ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ...
Cool ပြီးတော့“ Song About Schors” ကိုဘယ်သူမှတ်မိသေးလဲ။
Cool ပြီးတော့“ Song About Schors” ကိုဘယ်သူမှတ်မိသေးလဲ။ Schors သည်တိုက်လေယာဉ်များအားကင်းထောက်ရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူ၏မျက်လုံးများကိုမှန်ဘီလူးကြီးထွားစေခဲ့သည်။ သူသည်ကြည့်ရုံမျှသာရှိသေးသည်။ အော်ငိုမနေဘဲမြေကြီးပေါ်လဲကျခဲ့သည်။ သူသည်နီသောအသွေးဖြင့်သွေးထွက်နေသည်။
ကောင်လေး kibalchish ဒီကောင်လေးသူဒါကကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲ။ သူကလူတိုင်းကိုကူညီပြီးတရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်။ “ လေယာဉ်ပျံကကောင်လေးကိုမင်္ဂလာပါ!” Steamboats သည်ထိုကောင်လေးအားရွက်လွှင့်ခဲ့သည်။ မှန်ကန်တဲ့ရှေ့ဆောင် !! ! အားလုံးယောက်ျားတွေဥပမာတစ်ခု !!! ဒါ ...
အဘယ်ကြောင့်လူအားလုံးကွဲပြားခြားနားသောခါးရှိသနည်း ဤပြဿနာတွင်အကောင်းဆုံးကိုလူ့စိတ်ရိုက်နှက်။ အဆိုပါကျြကွိုးကွဲပြားခြားနားဖြတ်သည်။ သောကြောင့် .... ငါမခါးရှိသည်။ ငါဒါမနာလို! သင်တို့ရှိသမျှသည် ဝမ်းဆွဲ ...
“ ငါကမပျော်ဘူး!” ဟု SMS ပို့ပါ။ 3443 နံပါတ်သို့၊ သင် SMS ပိုပေးပို့လေလေ၊ SMS ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ 2,9 $ ဖြစ်သည်။
“ ငါကမပျော်ဘူး!” ဟု SMS ပို့ပါ။ 3443 နံပါတ်သို့၊ သင် SMS ပိုပေးပို့လေလေ၊ SMS ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာ 2,9 $ ဖြစ်သည်။ ကောင်းတယ် zhzhot aftar!))))) ကောင်းပြီ! ဆိုက်သို့သွားခဲ့သည် ...